Video: Youtube Video Kacaankii 2.0 | Martech Zone
Garan maayo adiga, laakiin waxaan bilaabay inaan arko wax badan oo dheeraad ah xayeysiinta Youtube. Maaddaama fiidiyowgu noqdo mid la awoodi karo oo saameyn leh, waxay umuuqataa in istiraatiijiyad kasta oo suuqgeyn ah ay u baahan tahay in lagu daro. Fiidiyowgu waa mid aad u gaar ah in uu gaaro qof walba. Qof kastaa ma akhriyo, laakiin qof kastaa wuu daawadaa. Iyo Youtube oo lagu rakibay gabi ahaanba barxad isku xiran, ma jirto hab aadan u daawan karin fiidiyowyada Youtube.
Ganacsatada, ayaa saameynta xayeysiiska ee fiidiyowyada la xiriira wuu sii kordhayaa Waxay umuuqataa in warshaddu ay shaqo weyn kaqabatay si tartiib tartiib ah u hirgalinta xayeysiisyada fiidiyowga ee dhaadheer iyo kuwa dheer iyo xayeysiisyada dadwaynaha. Waxaan daawaday 2 daqiiqo oo xayaysiis ah maalintii kale hal fiidiyow! Inta badan maahan, waxaan daawadaa tirinta "Ka bood Xayeysiiskan", in kastoo.
U hubso inaad kala soo baxdo Warbixintaada taraafikada ee Youtube Reel Sayniska Gudaha.
Tags: fiidiyowga fiidiyowgasuuqgeynta fiidiyowgayoutubeXogta youtube
Kordhi Aragtida Youtube
Waad ku mahadsantahay macluumaadkaaga Waxaan jeclaan lahaa inaan la wadaago wax ku saabsan adeegyada warbaahinta bulshada gaar ahaan youtube. Ku hay shaqo fiican baloogga.